Hlangana noRupa Kunwar Singh, iJockey yokuqala yabesifazane baseNdiya - Abaphumelele
Hlangana noRupa Kunwar Singh, iJockey yokuqala yabesifazane baseNdiya
Isithombe: Isithombe esimele / pexels.com
URupa Kunwar Singh ozinze eChennai wayengeyena umuntu wesifazane wokuqala owatshelwa ukuthi angenzi lutho ngoba kwakuthathwa njengomsebenzi wendoda. Wayengeyena futhi nowesifazane wokuqala ukubeka le mibono ngokwenza lokho ayefuna ukukwenza, kungakhathalekile ukucwasa ngokobulili nokubandlululwa emphakathini. Kodwa-ke, uyi-jockey yokuqala yabesifazane baseNdiya - umsebenzi obeyisizinda sabesilisa kusukela kudala.
Ekhuthazwa nguyisemkhulu noyise, uRupa walandela ifa lomndeni futhi wenza lo msebenzi. Umkhulu wakhe uD Ugam Singh Rathore wayejwayele ukuqeqesha amahhashi ebuthweni laseBrithani. ENdiya, abazali banokungabaza okuningi mayelana nokuphishekelwa kobungcweti kwezingane zabo zamantombazane. Kepha kuRupa, owafundiswa ngubaba wakhe uNarpat Singh Rathore emidlalweni yomqhudelwano wezemidlalo, weza njengesipho hhayi ukulwa. Uyavuma ukuthi wayemesaba ubaba wakhe ukwedlula amahhashi njengoba wayengumqeqeshi oqinile. Kungenxa kababa wakhe ukuthi uyakwazi ukuhlala nokulawula amahhashi emijaho - ikakhulukazi lawo angenawo umoya wokuthula - okuthathwa njengomsebenzi onzima ukufeza. Umkhulu kaRupa naye wamfundisa ukuthi angabamba kanjani kahle amahanisi futhi alondoloze ukuma okufanele lapho esehhashini.
Isithombe: T ubumanzi
Njengomjokhi wesifazane, uRupa akazange amukelwe ngezandla ezimhlophe ensimini, njengoba abaqeqeshi babejwayele ukubheka amantombazane entekenteke kunabafana. Wayehlale enikezwa ihhashi elijwayelekile lokugijima nalo. Kungemva kwesikhathi kuphela lapho enqoba imijaho esondele kwengu-50 lapho abantu baqala khona ukumthatha ngokungathi sína futhi abaqeqeshi banikeza amahhashi omjaho angcono kunangaphambili. URupa uzibonakalisile ngokunqoba imijaho engaphezu kuka-720 yezwe neyamazwe omhlaba kanye nemincintiswano eyisikhombisa.
Funda futhi: Hlangana noHima Kohli, iJaji Elikhulu Lokuqala Lenkantolo Ephakeme YaseTelangana
amahlaya amahle kakhulu e-hollywood
imovie yothando hollywood
uhlu lwama-movie omlando